Gabdhaha ciidamada Jabuuti
Kooxda Kubadda Cagta Gabdhaha ee Cidiamada Jabuuti oo Horyaalka ku Guuleystay Kooxda kubadda cagta gabdhaha ee ciidamada Jabuuti FAD, ayaa loo caleema saarkey kooxda ku guuleystay hroyaalka Jabuuti. Waa sanadkii labaad ee isku xiga ay tartankaasi ku guuleystaan.
Kooxda FAD ayaa 4 gool iyo waxba kaga adkaatay kulankoodii ugu dambeeyay kooxda Cheik Moussa, inkastoo koobka ay xaqiijiyeen inay ku guuleysteen isbuucii hore markii ay 3 iyo eber kaga adkaadeen kooxda ciidamada booliska.
Sidoo kale, kooxda Djibouti Telecom, ayaa markoodii 4-aad oo isku xiga ku guuleystay horyaalka kubadda cagta ee dalka Jabuuti. Kooxda ayaa ka 3 iyo eber kaga adkaaday dhiggooda dekadaha ee AS Port FC.